Harare, October 23, 2020: The United States remains the largest provider of health and humanitarian assistance, including the U.S. President’s Emergency Fund for AIDS Relief (PEPFAR), food assistance, and disaster relief, to the people of Zimbabwe. Since Zimbabwe’s independence in 1980, the U.S. government has provided over US$3.5 billion to the people of Zimbabwe, including initiatives to increase food security, support economic resilience, improve health outcomes, and promote democratic governance.
For the past four decades, the United States has consistently supported Zimbabwe when the country faces emergency needs, such as Cyclone Idai and the ongoing COVID-19 global pandemic. The U.S. committed over US$19 million to help Zimbabwe respond to the COVID-19 pandemic. This amount includes $10 million to ensure that 100,000 people in eight urban areas have access to adequate food supplies between August 2020 and January 2021. In addition, previous U.S. investments in the health care system totaling over a billion dollars laid the foundation for Zimbabwe’s efforts to combat COVID-19. U.S. health assistance concentrates on the prevention and treatment of the diseases that are the three leading causes of death in Zimbabwe—HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria—to help Zimbabweans live longer and healthier lives.
For more information about U.S. assistance to Zimbabwe, visit https://zw.usembassy.gov